मिर्गौला स्वस्थ राख्न के-के कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
काठमाडौ। नेपालजस्ता विकाशोन्मुख देशहरुमा मानिसको अभिन्न अंग मानिने मृगौला (किड्नी) धेरै फेल हुने गरेको छ। किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो। किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई विभिन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन्, जसका कारण हामीले ज्यानै गुमाउनुपर्ने समेत अवस्था आउँछ।
तसर्थ किड्नी भनेको के हो ? मानव शरिरमा किड्नीले के कसरी काम गरिरहेको हुन्छ ? किड्नी कसरी काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ ? किड्नी बचाउनका लागि के गर्नुपर्दछ ? यी यावत कुराहरु सबैले जान्न जरुरी छ। ग्राण्डी अस्पतालको विशेषज्ञ डा. प्रेमराज ज्ञवालीका किड्नी सम्वन्धि ९ महत्वपूर्ण जानकारी।
१. किड्नीको काम के हो ?
किड्नीले शरीरमा रस एवं रगतमा उपस्थित विजातीय तथा अनावश्यक तत्वलाई पिशाबबाट बाहिर निकाल्ने काम किड्नीले गर्दछ। प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ किड्नीसँग दिनहुँ ६० किलो जति पानी छान्ने क्षमता हुन्छ । फेरि पनि सामान्य रुपमा किड्नीले २४ घण्टामा एकदेखि दुई लिटर पिसाब बनाएर शरीरलाई निरोग राख्दछ।
मुटुद्वारा पम्प गरिएको रगतको २० प्रतिशत किड्नीमा जान्छ, जहाँ यो रगत सफा भई पुनः शरीरमा जान्छ। यसरी किड्नीले हाम्रो रगत सफा गर्दछ र सबै टाँक्सिन्स पिसाबबाट शरीरको बाहिर निस्कन्छ। किड्नी हाम्रो शरीरको सन्तुलनकारी अंग हो। यसको मतलब यदि शरीरमा कुनै चीज बढी या कम हुन्छ भने किड्नीले त्यसलाई सम्हाल्दछ।
२. किड्नी र मुटुबीचको सम्वन्ध कस्ताे ?
किड्नीको विशेष सम्बन्ध मुटु, फेक्सो र कलेजोसँग हुन्छ। मुख्यगरी मुटु र किड्नीले परस्पर सहयोगको साथ काम गर्ने गर्दछ। त्यसकारण, यदि कसैलाई मुटु रोग लागेको छ भने उसको किड्नी पनि बिग्रिन्छ। त्यसबेला त्यो व्यक्तिको रक्तचाप उच्च हुन्छ र क्रमशः मुटु पनि दुर्बल भएर जान्छ।
३. किड्नी फेल हुनुका कारण के–के हुन् ?
किड्नी फेल हुनाका मुख्य कारणहरुमा मुटु, दम, श्वास, टि.बी., सुगर, प्रेसरजस्ता रोगहरुको निदानका लागि भनेर आधुनिक औषधीहरुको बढी सेवन गर्नु हो। यी आधुनिक औषधीहरुको अल्पकालीन सेवनको विनाशकारी प्रतिक्रियाको रुपमा पनि किड्नी फेलजस्तो गम्भीर रोग हुने गरेको देखिन्छ। यी आधुनिक औषधीहरुको विषाक्त प्रभावका कारण नै किड्नी तथा पिसाबसम्बन्धी रोग उत्पन्न हुन्छ।
४. किड्नी के हो, हाम्रो शरीरमा कहाँनिर हुन्छ ?
किडनी शरीरको बीचैबीच कम्मरको नजिक हुन्छ। यो अंग मुठ्ठिको बराबर हुन्छ। हाम्रो शरीरमा दुईवटा किड्नी हुन्छन्। यदि एउटा किड्नी पूर्ण रुपमा खराब भयो भने पनि अर्को किड्नीले शरीरलाई ठीक रुपमा सञ्चालन गर्दछ।
५. किड्नी खराव हुनु भनेको के हो ?
किड्नी खराब हुनुको मुख्य लक्षण सुन्निनु हो। शरीरमा पानीको मात्रा बढी भयो भने सुन्निने समस्या हुन्छ भने नूनको मात्रा बढी भयो भने उच्च रक्त चाप हुन्छ। यसबाहेक रगत बनाउनु, हड्डिहरुलाई मजबुत पार्नु अर्थात् भिटामिन ‘डी’ बनाउनु, उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्नु र शरीरमा उत्पन्न भएका खराब पदार्थलाई शरीरबाहिर निकाल्ने काम गर्दछ। किड्नीका कैयौं समस्याहरु हुन्छन्, जसलाई जान्न आवश्यक छ।
६. नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम र यसका लक्षणहरु के–के हुन् ?
किड्नीमा फिल्टर अर्थात् स–साना छिद्र हुन्छ, जसले खराब तत्वलाई शरीर बाहिर निकाल्ने र राम्रो तत्वलाई शरीरका लागि लाग्दछ। नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा किड्नीमा जुन फिल्टर हुन्छ, त्यसका छिद्रहरु ठूलो भएर जान्छ र ती छिद्रबाट शरीरका लागि उपयोगी तत्व पनि खराब तत्वका साथमा बाहिर निस्कन्छ। परिणामतः बिहान अनुहार सुन्निने तथा बेलुका खुट्टा खासगरी पैताला सुन्निने गर्दछ।
यो किड्नी बिरामीको सुरुको लक्षण हो। उपचार यसको उपचारका लागि बायोप्सी नामको क्रिया गरिन्छ, जसको माध्यमद्वारा पत्ता लाग्दछ कि न्यूट्रोटिक सिन्ड्रोम कुन अवस्थामा छ भन्ने। सही तरिकाबाट उपचार गर्नाले बिरामी निको हुन्छ। तर सुन्निने समस्याप्रति ध्यान दिएन र समयमै उपचार गरेन भने बिस्तारै बिस्तारै किड्नी फेल हुन पुग्दछ। सावधानी जब सुन्निने समस्या देखा पर्दछ, तुरुन्तै किड्नी विशेषज्ञको सम्पर्कमा जानुपर्दछ।
खानामा नुन कम गर्ने र पिउने चीजमा पानीको मात्रा एकदेखि डेढ लिटर मात्र पिउनुपर्छ। यो भनिन्छ कि पानी धेरै पिउनाले किड्नी ठीक रहन्छ, यो भनाइ सही होइन। किड्नीको पत्थरी हुँदा धेरै पानी खानु ठीक हो। तर अन्य बिरामी भएको हकमा धेरै पानी पिउनाले किड्नीलाई नोक्सान पुर्याउन सक्दछ। समयमै उपचार गर्दा यस्तो रोग लागेका बिरामी ९० प्रतिशत ठिक हुन्छन्।
७. किड्नी स्टोन (पत्थरी), यसको लक्षण र उपचार कसरी गर्ने ?
किड्नी स्टोन तथा पत्थरी आमरुपमा देखापर्ने समस्या हो। यो किड्नीसम्बन्धी दोस्रो मुख्य समस्या हो। बिरामीको पिसाबमा केही तत्व तथा रसायनको मात्रा बढी हुन्छ। जुन तत्व पिसाबसँग घोलिँदैन, जुन जमेर स्टोन अर्थात् पत्थर बन्न जान्छ। क्याल्सियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, सिस्टीन र कैयौं अन्य तत्वले स्टोन बनाउँछ।
जब पत्थर बन्छ, त्यो क्रमशः ठूलो हुँदै जान्छ र यसले पिशाबको बाटो बन्द गरिदिन्छ। यसबाट किड्नीको संक्रमण तथा फेल हुने जोखिम बढेर जान्छ। किड्नी पत्थरीको लक्षण भनेको पिसाब रोकिनु, असह्य दुखाइ, पिसाबमा रगत आउनु, पिसाब पोल्नु, संक्रमण हुनु तथा दुखाइको क्रममा उल्टी समेत हुनु हो।
८. उपचार कसरी गर्ने ?
यदि पत्थर ६ मि.मि.भन्दा सानो छ भने त्यो पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। त्यसका लागि अपरेशनको आवश्यकता पर्दैन। दुखाई धेरै भयो र धेरै रगत आइरहेको छ भने चाहिँ अपरेशनको जरुरत पर्दछ। दश मि.मि.भन्दा बढी मात्राको पत्थरी कहिल्यै पनि पिसाबबाट निस्कन नसक्ने हुँदा त्यसको अपरेशन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प हुँदैन।
९. सावधानी कसरी अपनाउने ?
स्टोन नबनोस् भन्नका लागि दिनमा तीनदेखि चार लिटर पानी अनिवार्य पिउनु पर्दछ। पानीको कमी भयो भने केमिकल कन्सन्ट्रेशन बढ्दछ भने पानी बढी भयो भने कन्सन्ट्रेशन कम हुन्छ। पिसाब आउँदा रोक्नु हुन्न। पिसाब रोक्दा केमिकल कन्सन्ट्रेशन बढ्छ। किड्नीको कुनै बिरामी वा संक्रमण छ भने तुरुन्तै उपचार गराउनु पर्दछ, किड्नीको सबै रोगहरु स्थायी हुँदैन। सही उपचारबाट खराब किड्नी ठीक हुन सक्छ।
किड्नी फेल भनेको किड्नीले आफ्नो काम नगर्नु हो। अर्थात् शरीरमा सन्तुलन कायम नहुनु हो। यसो हुँदा शरीर सुन्निन्छ तथा ब्लडप्रेशर बढ्छ। केमिकल्स, जस्तो यूरिया, क्रिएटिनाइन, पोटेशियम बढ्न थाल्दछ। त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ कि किड्नीले काम गरिरहेको छैन।